OpenAPI | Zeevou ပေါင်းစည်းမှု
Integrated » OpenAPI
ကျွန်ုပ်တို့၏ OpenAPI သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေသောတန်ဖိုးရှိသောအသစ်စာရင်းကိုတိုးချဲ့ရန်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည် ပေါင်းစည်းမှု ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်အိမ်ရှင်များသည်သူတို့၏စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ယခုသင်သင်၏ Zeevou အကောင့်ကိုသင်လိုအပ်သည့်မည်သည့် software နှင့်မဆိုဆက်သွယ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ OpenAPI (Application Programming Interface) မှတစ်ဆင့်အချက်အလက်များကိုလွယ်ကူစွာမျှဝေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ OpenAPI သည်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲပံ့ပိုးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့်အလိုအလျောက်အဆင့်မြှင့်တင်လိုသောဖောက်သည်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
OAuth 2.0 ပြန်ညွှန်း URL
Zeevou Integration Partner ဖြစ်ရန်တောင်းဆိုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အီးမေးလ်ကိုနောက်အဆင့်များစစ်ဆေးပါ။
သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုမှတ်ပုံတင်ရာတွင်ပြaနာရှိပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ထပ်မံကြိုးစားပါ (သို့) system administrator ကိုဆက်သွယ်ပါ။
အခြားရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) နှင့်ဆက်သွယ်ပါ
Zeevou ရဲ့ OpenAPI ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
Zeevou မှတစ်ဆင့် OpenAPI ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကားအဘယ်နည်း။
OpenAPI သည်ခေတ်မီ API ကိုဖော်ပြရန်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်လက်ခံသောစံတစ်ခုဖြစ်သည် Public API ဟုလူသိများသည့် OpenAPI သည်အများဆိုင်“ Application Program Interface” သို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပရိုဂရမ်များနှင့်ဝက်ဘ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အချို့သောအတွင်းပိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအခမဲ့ရယူရန် developer များကအသုံးပြုသည်။ APIs များသည် application များအချင်းချင်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးဒေတာများကိုကူညီသည်။
OpenAPI သည်ဖောက်သည်များနှင့် developer များအတွက်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။ ထို့ကြောင့် OpenAPI ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအလိုအလျောက်အဆင့်ဆင့်ရရှိခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး ၀ န်ထမ်းအချိန်၊ စွမ်းအင်နှင့်ငွေများကိုသက်သာစေသည်။ သင်၏ကာလတိုငှားရမ်းမှုလုပ်ငန်းတွင် OpenAPI အသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအောက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
OpenAPI ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် developer များ၏အချိန်ကိုသက်သာစေပြီး frontend ကိုငှားရမ်းရန်နှင့် developer များကို backend လုပ်ရန်လိုအပ်ခြင်းသည်သိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။
OpenAPI နဲ့အတူ၊ coding အမှားများကိုလျှော့ချလိမ့်မည်။
OpenAPI သည်အိမ်ခြံမြေစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည်ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းနှင့်အရည်အသွေးကိုအာမခံနိုင်ခြင်းကြောင့် OpenAPI သည်စနစ်၏ API ကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်အရာရာတိုင်းကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်စေရန်သေချာစေရန်ခွင့်ပြုသည်။
OpenAPI တွင် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုပေးနေသည့်အရာနှင့်၎င်း၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများကိုသုံးစွဲသူများနှင့်စက်များနှစ်မျိုးစလုံးကိုနားလည်စေရန် OpenAPI သတ်မှတ်ချက် (သို့) OAS လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အရင်းအမြစ်ကုဒ်များသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုအချိန်ကုန်သက်သာစေသည့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများကိုရယူရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်ကမှတဆင့်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် OpenAPI စာရွက်စာတမ်းများ.
၎င်းသည်သင် download လုပ်နိုင်သော JSON ဖိုင်ဖြစ်သည် OpenAPI စာရွက်စာတမ်းများ.
Zeevou ၏စာရွက်စာတမ်းများနှင့် API များသည် OpenAPI ကိုအခြေခံသည်။ သင်ပေါင်းစည်းမှုမိတ်ဖက်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ပြီးသင်၏ဆော့ (ဖ်) ဝဲသို့မဟုတ်အက်ပ်ကို Zeevou နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် OpenAPI ကိုသုံးနိုင်သည်။
Zeevou ရဲ့ OpenAPI ကဘယ်လိုကူညီသလဲ။
OpenAPI သည်စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သဖြင့် OpenAPI ကိုအသုံးပြုသောမည်သည့် API သည်မဆိုအကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုလိုက်နာသည်။
Zeevou ၏ OpenAPI သည်သင့်အားစိတ်တိုင်းကျပေါင်းစပ်မှုများတည်ဆောက်ရန် Zeevou ကိုတည်ဆောက်သည်။ သင်သည် Zeevou နာယကတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်အချို့သောအချက်အလက်များကိုတစ်ကြိမ်တည်းဖြစ်စေ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်စေထုတ်ယူလိုသည်ဖြစ်စေ၊ အခြားဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဖြစ်စေ၊ သင်၏ဖောက်သည်များအတွက်အလိုအလျောက်ဖြစ်စဉ်များကိုကူညီလိုသောဖြစ်စေဖြစ်စေ Zeevou ၏ OpenAPI ကသင့်ကိုခွင့်ပြုသည်။
Zeevou နာယကအနေနှင့်သင်သည် OpenAPI ကိုအခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်စိတ်ကြိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပြုလုပ်ရန်အတွက်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကိုဆွဲထုတ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ API ကိုကလစ်အနည်းငယ်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ Zeevou ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ပို့ကုန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများမှတဆင့်သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုသင်တိုက်ရိုက်ထုတ်ယူနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ပိုမိုစိတ်ကြိုက်မေးမြန်းမှုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ဆန္ဒရှိပါကဤပေါင်းစည်းမှုသည်သင့်အားအချိန်ကုန်သက်သာစေသည်။ သင်၏ STR သို့မဟုတ်အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခအတွက်သီးသန့်တိုက်ရိုက်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတည်ဆောက်လိုခြင်းနှင့် Zeevou ၏အင်္ဂါရပ်များကို backend တွင်အသုံးပြုခြင်းသည်အခြားအသုံးပြုမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏စာရင်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုလွယ်လွယ်ကူကူဆွဲယူနိုင်ပြီး stay ည့်သည်များသူတို့နေထိုင်ခွင့်ကိုမှတ်သားထားနိုင်ပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်အပိုထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပိုမိုရောင်းချနိုင်သည်။
ပေါင်းစည်းမှုမိတ်ဖက်တစ်ယောက်အနေဖြင့်သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ OpenAPI မှတစ်ဆင့် Zeevou ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုမဆိုတော်တော်များများကိုရယူနိုင်သည်။ သင်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်း၊ အလုပ်များသို့မဟုတ် or ည့်သည်အချက်အလက်များကိုဆွဲယူလိုသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏ OpenAPI သည်အပြည့်အဝနှင့်အသေးစိတ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ သင်၏ပေါင်းစည်းမှုအတွက်မလိုအပ်သေးသောနယ်ပယ်များရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားလိုင်းတစ်ခုချကာကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းရန်အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဆောင်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ OpenAPI ကိုအကောင်းဆုံးတုန့်ပြန်မှုအချိန်များအတွက်ခေတ်မီ RESTful နည်းပညာပေါ်တွင်အခြေခံထားသည်။ နှင့်ဆက်သွယ်မှု၏တည်ငြိမ်မှု။